Naya Bikalpa | महाअधिवेशन पछि को अध्यक्ष बन्ने त्यतिबेला नै निर्णय हुन्छ - Naya Bikalpa महाअधिवेशन पछि को अध्यक्ष बन्ने त्यतिबेला नै निर्णय हुन्छ - Naya Bikalpa
महाअधिवेशन पछि को अध्यक्ष बन्ने त्यतिबेला नै निर्णय हुन्छ
प्रकाशित मिती: २०७५ जेष्ठ ७, ०८: ४२: ३३
युवराज ज्ञवाली– स्थायी समिति सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा जुट्दै फुट्दै गरेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु ने.क.पा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण भएको छ । तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको स्मृति दिवसको दिनमा पार्टी एकीकरण गरेका दुई पार्टीले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै एउटै पार्टी निर्माण प्रकृया पुरा गरेका हुन् ।
दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरणपछि नेपालको राजनैतिक क्षेत्रले चर्चा पाएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादीले केन्द्र प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेका कारण तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भएको हो । छ महिना अगाडी चुनावी तालमेल देखिको सहकार्य बिहिबार पार्टी एकीकरण भएर टुंगिएको छ । गाउँस्तरदेखि जिल्लास्तरसम्म र पार्टीका श्रीसम्पति सम्मको व्यवस्थापन मिल्न बाँकी भएता पनि दुवै पार्टीको केन्द्रीय समिति भंग भएर नयाँ संरचनाअनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको छ ।
उक्त नयाँ पार्टीमा २ जना अध्यक्ष, २ जना वरिष्ठ नेता, महासचिव १, प्रवक्ता १ र ३ जना सदस्य गरी ९ सदस्यीय सचिवालय, ४३ सदस्यीय स्थायी समिति, ४४१ केन्द्रीय समिति गठन भएको सन्दर्भमा नयाँ पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवम् विघटित एमाले पार्टीका निवर्तमान उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसँग नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः
नेपालको राजनीतिमा दुई धारबाट राजनीति गर्दै आएका दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको खाँका कसरी तयार भयो ?
छोटकरीमा भन्ने हो भने एकताको सन्दर्भमा मुख्य रुपमा दुईवटा अध्यक्षलाई के गर्ने भन्ने एउटा ठूलो समस्या थियो । सुरुमा दुईवटै अध्यक्षलाई सहअध्यक्षको रुपमा राख्ने र आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने रहेको थियो । तर त्यो पनि सम्भव नभएपछि जुनबेला जुन व्यक्तिले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, त्यही व्यक्ति पहिलो नेता हुनेगरी दुइवटा अध्यक्षहरुको व्यवस्थापन गरिएको हो ।
अहिले दुईवटा अध्यक्षहरुले पालैपालो अध्यक्षता गर्नुहुने छ । महाअधिवेशन अगाडी यहीअनुसारको संरचनाले पार्टीलाई अगाडी बढाउने तय भएकोले महाअधिवेशन पछिको अध्यक्ष को हुने भन्ने कुरा महाअधिवेशनले निर्णय गर्ने भएको हुनाले त्यस सम्बन्धि अहिले केही गर्नु परेन । त्यसैगरी अर्को एउटा ठूलो समस्या थियो, जनताको बहुदलिय जनवाद र माओवादीको २१औं शताब्दीको जनवादलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने लामो छलफल पछि के निश्कर्षमा पुगियो भने जनताको बहुदलीय जनवाद २१औं शताब्दीको जनवाद र माओवादलाई महाअधिवेशनसम्म छलफलको विषय बनाएर लैजाने भन्ने सहमति अनुसार अन्तर पार्टी बहसको विषय बनाउने र अन्तिममा के गर्नुपर्ने हो त्यो महाअधिवेशनले नै टुङ्गो लगाउने गरी त्यो समस्याको समाधान गरिएको छ ।
महाअधिवेशनसम्मको लागि माक्र्सवाद, लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर जाने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो । यसको समाधान भैसकेको छ । अरु बाँकी चाँहि केन्द्रीय कमिटि कसरी मिलाउने यसमा चाँहि धेरै लामो छलफल लिएर टुङ्गोमा पुगिएको हो ।
माओवादी केन्द्रमा पाँच हजार केन्द्रीय सदस्यहरु छन् भन्ने छ नी कसरी समायोजन गर्नुहुन्छ ?
यही कुरामा धेरै लामो छलफल भयो । यो ढिलो हुनमा महत्वपूर्ण कारण यो पनि थियो । त्यसलाई हामीले योग्यता, क्षमताको आधारमा जाने र नेकपा एमालेको तर्फबाट २४१ जना र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बाँकी २०० जना गरेर जम्माजम्मी ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिति बनाउने र स्थायी कमिटिमा एमालेको तर्फबाट २५ जना र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट १८ जना गरी ४३ जनाको स्थायी कमिटि बनाउने भन्ने टुंगोमा पुगिएको छ । अहिले पोलिटब्युरोको बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन ।
अहिलेनै पोलिटब्युरोको बारेमा तपाईहरुले किन निर्णय गर्न सक्नुभएन त ?
पोलिटब्यूरोको बारेमा पछि निर्णय गर्ने अहिले केन्द्रीय कमिटि र स्थायी कमिटिको जुन खालको अंक छ, त्यसलाई मान्ने भन्ने हो । यो आधारमा नै पोलिटब्यूरो बनाउन सकिने सहमति भएको छ । अहिलेको लागि हामीले अन्तरिम विधान बनाएका छौं, त्यसमा केन्द्रीय कमिटि, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटि भनेर नै त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ । त्यसो भएको हुनाले विधान बमोजिम हामीले महाअधिवेशन अगाडी नै पोलिटब्यूरो बनाउनुपर्ने छ । कहिले बनाउने भन्ने कुरा पछि निर्णय हुन्छ ।
त्यसोभए पोलिटब्यूरोमा भागवण्डा नमिलेको हो त ?
पोलिटब्यूरोमा भागवण्डा नमिलेको भन्दा पनि अलिकति अभ्यास गर्नुपर्ने भएका कारण समय अभाव भन्ने छ । यो मिलिहाल्छ यसमा ठूलो समस्या छैन । किनकी केन्द्रीय कमिटि र स्थायी कमिटिको संख्था टुङ्गो लगाइसकेपछि पोलिटब्यूरोको संख्या यसै पनि टुङ्गो लाग्छ । त्यसमा ठूलो समस्या छैन । यसरी नै यो पार्टी एकता गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो । बिहिबार बालुवाटारमा एकता संयोजन समितिको बैठकले सबै कुराको निर्णय गरेको हो । त्यहीअनुसार बिहिबारै साँझ राष्ट्रिय सभा गृहमा पार्टी एकताको घोषणा भएको हो ।
पार्टी एकतापछि महाधिवेशन २ वर्षभित्रमा हुन सक्छ त ?
दुई वर्ष भित्रत्रमा एकताको महाअधिवेशन गर्नेछौ । त्यो महाअधिवेशनले सहमतिको आधारमा नेतृत्वको चयन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।
उसोभए सहमतिको आधारमा महाअधिवेशनपछि प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने समझदारी तय भएको हो ?
यस सन्दर्भमा कुनै समझदारी बनेकै छैन । तपाइले सुन्नु भएको छ भने त्यो गलत हो । महाअधिवेशन पछिको अध्यक्ष को बन्ने त्यति बेलानै तय हुन्छ । त्यसबारेमा अहिले कुनै चर्चा परिचर्चा केही निर्णय गर्ने कुरा भएको छैन । तबसम्मको लागि दुई जनाले क्रमशः आलोपालो केन्द्रीय कमिटिको पोेलिटब्यूरो र स्थायी कमिटिको अध्यक्षता गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । महाअधिवेशन पछिको नेतृत्वको बारेमा कुनै समझदारी केही पनि भएको छैन् । तपाईलाई प्रष्ट रुपमा के बताउ भने महाअधिवेशनपछि को के बन्ने त्यस बारेमा कुनै पनि निर्णय सहमति केही पनि भएको छैन । अहिले भएको सहमति अनुसार चाँही पार्टीको अध्यक्षमा आलोपालो गर्ने निर्णय भएको छ । महाअधिवेशनसम्म सैद्धान्तिक बहस छलफल घनिभुत रुपमा चल्छ । एकले अर्कालाई कन्भिन्स गर्ने कुरा हुन्छ र महाधिवेशनले यी जम्मै कुराको टुङ्गो लगाउँछ ।
उसो भए अहिलेको सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनबाद मात्र हुने भयो हैन त ?
अहिले माक्र्सवाद लेनिनवाद मात्रै रहन्छ । माओवाद र जनताको बहुदलिय जनवाद छलफलमा जान्छ । त्यसबारे महाधिवेशनले मात्रै अन्तिम फैसला गर्छ । तबसम्म छलफल बहस गर्छौ । त्यसपछि महाअधिवेशनले टुङ्गो लगाउँछ र त्यही अनुसार अगाडी बढ्छौं ।
पार्टी एकताको लागि बामदेव गौतमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको चर्चा छ नी ?
पार्टी एकताको सन्दर्भमा विभिन्न नेताहरुले विभिन्न कालखण्डमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । सबै नेताहरुको प्रयासबाट यो निश्कर्षमा पुगिएको हो । विभिन्न व्यक्तिहरुले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा कतिपय बेला अत्यन्त जोखिम मोलेर पनि दुई पार्टीलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने र मुलुकको राजनीतिलाई अगाडी बढाउनमा भूमिका खेल्नु भएको छ । अब पछिल्लो कालमा आएर चाँहि पार्टी स्थायी कमिटिले प्रचण्डसँग वार्ता गर्नको लागी बामदेव गौतमलाई जिम्मा दिएको हो । त्यसमा उहाँको अवश्य पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ तर मुख्य भूमिका अध्यक्षकै हो भन्ने लाग्छ ।
एमाले र माओवादी एकता हुनुमा कुन कुन नेताहरुको भूमिका देख्नुहुन्छ ?
स्वभाविक रुपमा अध्यक्षको हैसियतले के.पी शर्मा ओलीको भूमिका प्रमुख नै रह्यो भन्ने लाग्छ । त्यसमा माधव कुमार नेपाल, बामदेव गौतम लगायतका विभिन्न नेताहरुले विभिन्न समयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । निश्चित रुपमा एकता हुन्छ भनेर मैले धेरै पहिला नै भनेको थिए । यो कुरा आज आएर पुरा भयो ।
पार्टी एकताको कुरा गर्दाखेरी पार्टी एकता चाहने धेरै र नचाहने कम थिए भन्ने चर्चा थियो नि ?
होइन, होइन, सबै एकता चाहन्थे र सबै खुसी चाहन्थे । सबैमा उल्लास, उत्साहमय वातावरण छ । अहिले हामी सबै स्थायी कमिटिको सदस्य छौं । झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, बामदेव गौतम देखि लिएर हामी सबै स्थायी कमिटिको सदस्य छौं । पदाधिकारीमा दुईवटा अध्यक्ष मात्र हुनुहन्छ । अरु सबै स्थायी कमिटिको सदस्य छौं । महाअधिवेशन भन्दा यता चाँहि पदाधिकारी रहन्न । पार्टीमा स्थायी कमिटिको पनि भूमिका हुन्छ । उहाँहरु दुई जना मात्र होइन । अहिले स्थायी कमिटि चाँहि अत्याधिक क्रियाशिल रहन्छ । स्वभाविक रुपमा दुईवटा अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने नै छ । अहिले एमाले पार्टी भित्रको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि प्रदेश सदस्य सहित गरेर २६ जना यो स्थायी कमिटिमा रहने छन् ।
अन्त्यमा यहाँले सरकारको तीन महिनाको कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
एउटा महत्वपूर्ण कुरा पार्टी एकताको कुरा थियो, त्यो कुरा पुरा भएको छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटको बारेमा छलफल भइरहेको छ । साथसाथै यो बीचमा दुईवटा देशका प्रधानमन्त्रीको एक आपसमा नेपाल र भारत भ्रमण पनि भएको छ । यो भ्रमणले ठूलो उपलब्धी भएको छ । साथसाथै अरु तमाम कामहरुको लागि एउटा आधार तयार भइरहेको छ । सकारात्मक दिशातर्फ मुलुक जाने एकदमै राम्रो सम्भावना देखा परेको छ । विभिन्न चुनौतिहरु छन् । जनताका विभिन्न समस्याहरु छन् ति चुनौति र समस्या समाधान गर्नका लागि अब यो पार्टी गम्भीर रुपमा लाग्छ । जनताले खोजेको परिणामहरु अब एक–एक गर्दै देखा पर्दै गर्दै जानेछन् । अन्तमा तपाईको लोकप्रिय नयाँ विकल्प साप्ताहिक पत्रिकामार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भए लगत्तै मेरा विचार जनताको बीच पु¥याउने अवसर दिनुभएकोमा पत्रिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
२०७५ जेष्ठ ७, ०८: ४२: ३३